शीतकालीन समयमा ड्राइभिङ्ग बेला सुरक्षित कसरी रहनुहोस् गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीतकालीन समयमा ड्राइभिङ्ग बेला सुरक्षित कसरी रहनुहोस् गर्न
शीतकालीन समयमा ड्राइभिङ्ग बेला सुरक्षित कसरी रहनुहोस् गर्न
कार यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
जाडो crackling आगो निर्माण गर्न सही समय छ, सुरक्षित ढलान मारा, Snowmen निर्माण र चिया एक राम्रो कप संग snuggle. दुर्भाग्यवश, यो सबै छैन रमाइलो र खेल. जाडो पनि सबैभन्दा छली सडक केही सिर्जना अवस्था. किनभने यो हामी सबै भन्दा सम्म सीतनिद्रा लागि सम्भव छैन छ वसन्त, यहाँ छन् सुझाव तपाईं जाडो समयमा सवारी चलाउँदा सुरक्षित रहन कसरी आवश्यक.
सुरक्षित ड्राइभिङ्ग? संख्या झूट नगर्नुहोस्
हामी तपाईँलाई सुझाव दिने शीतकालीन समयमा सवारी चलाउँदा कसरी सुरक्षित रहन अचाक्ली सावधान हुनुको छन् जस्तो लाग्छ? यस अनुसार एएए, जाडो आँधीबेहरी, खराब मौसम, र लापरवाहीसंग सडक अवस्थामा एक लगभग आधा लाख र भन्दा बढी दुर्घटनाहरु एक कारक हो 2,000 सडक मृत्यु हरेक जाडो.
तपाईंको कार यात्रा लागि प्याक अप आपतकालीन आपूर्ति
कहिलेकाहीं, यस समयमा सवारी चलाउँदा सुरक्षित रहन आफ्नो इरादा जाडो पर्याप्त छैन. हामी आदर्श वाक्य द्वारा बाँच्न मन, 'सबै भन्दा राम्रो लागि आशा, सबैभन्दा खराब 'को लागि तयार. बनाउन आफ्नो कार छ पक्का आपूर्ति संग outfitted आपतकालीन को मामला मा. न्यानो कम्बल समावेश, न्यानो लुगाहरु, पहिलो सहायता किरा, एक टर्च वा चम्कने बस्तु, जम्पर केबल, एक बरफ खुरचनी, एक बेल्चा, बालुवा वा किट्टी फोहर फाल्न तपाईं कर्षण दिन, र हिउँ चेन. तपाईं पनि केही पानी बोक्न गर्नुपर्छ, खाना आपूर्ति-like ऊर्जा बारहरू वा निशान मिश्रण-र फोन चार्जर!
तपाईंको दर्पण गर्न रहो सुरक्षित सवारी चलाउँदा मा आइस जाँच
यो एक जाडो ड्राइभिङ टिप कि व्यावसायिक छ लामो-हउल चालक सडक अवस्था चिसो भने निर्धारण गर्न प्रयोग. तपाईंको बाहिर दर्पण निरीक्षण. बरफ को दर्पण मा गठन गर्ने सुरु गरिएको छ भने, भन्ने बरफ पनि Roadways मा निर्मित एक राम्रो सूचक हो. यसलाई ड्राइव सम्म warms सम्म सवारी चलाउँदा सुरक्षित रहन वा प्रतीक्षा गर्न अतिरिक्त सावधानीहरु लिन.
सुरक्षित ड्राइभ र प्रारम्भिक छोड्नुहोस्!
यो स्पष्ट जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामी व्यस्त र आफ्नो अर्को गन्तव्य प्राप्त गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ थाहा. हामी लिन यो निकै ढिला सम्झाउने यहाँ हुनुहुन्छ! एक हाम्रो मुख्य सुझावहरू को जाडो समयमा सवारी चलाउँदा कसरी सुरक्षित रहन मा आइपुग्दा अतिरिक्त समय अनुमति दिन्छ तपाईंको गन्तव्य. यात्राको वर्ष को अन्य पटक भन्दा जाडो समयमा अब लाग्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं आँधी अवस्था वा चिसो सडक सामना. र inclement मौसममा ड्राइभिङ लेट हुनुको थपियो दबाव बिना पर्याप्त तनावपूर्ण छ, जो आफ्नो सुरक्षित ड्राइभिङ न्याय क्लाउड सक्छ.
सुरक्षित ड्राइभ र अलमल्याउने न्यूनतम
शीतकालीन समयमा सवारी चलाउँदा कसरी सुरक्षित रहन #1 टिप: तपाईँको फोन राखे! तपाईँको फोन बन्द राख्न वा आफ्नो कारको जोडिएको ब्लुटुथ-र पाङ्ग्रा वा आँखा बन्द आफ्नो हात सडक बन्द भनेर जाँच गर्न लिन कहिल्यै WhatsApp सन्देश.
जबकि ड्राइभिङ्ग मतलब रोड सुन्नुहोस् सुरक्षित रहन!
कुनै, आफ्नो हृदय सुन्न छैन. जे भए पनि यो समय छैन. सडक सुन्न. शाब्दिक. जब हिउँ र बरफ ड्राइभिङ टायर फरक ध्वनि बनाउन, जो जाडो ड्राइभिङ सुरक्षाको लागि तपाईँको रेडियो मात्रा तल राख्न अर्को कारण हो. हिउँ अप kicked किनभने हिउँ सडक हल्ला अपेक्षाकृत ठूलो हुनुपर्छ. यदि ठूलो सोरले अचानक रोक्छ, तपाईं बरफ हिउँ देखि सारियो हुन सक्छ. रहन मा रूपबाट ध्वनि सडक मा आफ्नो टायर को अक्सर चाँडै परिवर्तन गर्न सडक अवस्था माथि राख्न, विशेष गरी समयमा वा दायाँ एक आँधी पछि.
विरोधी स्थिर तपाईं सुरक्षित रहन सवारी चलाउँदा चाहनुहुन्छ भने
शीतकालीन समयमा ड्राइभिङ्ग बेला सुरक्षित कसरी रहन? निश्चित आफ्नो wiper तरल पदार्थ विरोधी स्थिर समावेश, त्यसैले स्प्रे चिसो मौसम मा स्थिर छैन. जाडो wiper ब्लेड खरीद विचार, जो बरफ र हिउँ पनि wiper मा सख्त रोक्न!
म आफ्नो सुझाव पछि र अझै पनि फँस भयो
कहिलेकाहीं, यी कुराहरू बचा खिचडी. तपाईं हिउँ मा फँस भने यहाँ केही द्रुत सुझावहरू छन्:
आफ्नो वाहन संग रहन: आफ्नो वाहन अस्थायी आश्रय प्रदान गर्दछ र यसलाई rescuers तपाईं लगान लागि सजिलो बनाउँछ. एक गम्भीर आँधी हिंड्न प्रयास नगर्नुहोस्. हिउ उड्ने आफ्नो वाहन को दृष्टि गुमाउन र हराएका बन्न सजिलो छ.
आफैलाई overexert छैन: आफ्नो वाहन बाहिर digging गर्दा, आफ्नो शरीर सुन्न र थकित बन्न यदि रोक्न.
देखिने: आफ्नो वाहन को एन्टेना एक झन्झन् रंग कपडा बाँध वा दुःखको संकेत गर्न रोल्ड अप सञ्झ्यालको माथि एक कपडा राख्न. रातमा, यस घरको छानो प्रकाश यदि सम्भव मा राख्न. यो केवल बिजुली को एक सानो रकम प्रयोग र सजिलो rescuers तपाईं फेला पार्न लागि गर्नेछ.
निकास पाइप खाली: बनाउन निकास पाइप हिउँ संग भरा छैन पक्का, बरफ वा माटोको. इन्जिन चलिरहेको छ, जबकि एक अवरुद्ध निकास पाइप वाहन को यात्री कक्ष मा लीक गर्न घातक कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास हुन सक्छ.
वार्म रहन: चिसो बाट आफ्नो शरीर ढाक्नु गर्न जो उपलब्ध छ प्रयोग. यो तल्ला मैट समावेश गर्न सक्छ, समाचार पत्र वा कागज नक्सा. पूर्व-प्याक कंबल र भारी वस्त्र आपतकालीन को मा मामला प्रयोग गर्न.
इन्धन संरक्षण: यदि सम्भव छ भने, केवल चिसो हटाउन लामो पर्याप्त इन्जिन र हीटर चलाउन. यो इन्धन संरक्षण गर्न मदत गर्नेछ.
कार यात्रा? सबै बेवास्ता हामी बस भन्नुभयो
ड्राइभिङ गर्दा त्यहाँ एक तरिका थियो भने के को बसाइ सुरक्षित सबै माथि परेशानी जोगिन सक्छ? यदि तपाईं केवल मा हाम फाल्न सक्ने परिवहन को एक मोड थियो, र चाँडै तपाईँको गन्तव्य प्राप्त र सुरक्षित यात्रा. ओह प्रतीक्षा, त्यहाँ छ! यो एक रेल भनिन्छ गर्नुपर्छ!
यो कि कार केही अन्य कि स्वतन्त्रता प्रदान साँचो हो transports को मोड के. तपाईं अन्यथा पहुँचयोग्य साथ यात्रा गर्न सक्छन् तटीय सडक, रिमोट गाउँमा टाउको, र कार्यक्रम वा सिट बाहिर बिक्री चिन्ता छैन. तिनीहरूले कमीकमजोरी बिना हुनुहुन्छ, तथापि. माथिको धेरै कारणहरू हेर्नुहोस्!
गाडिहरु सुरक्षित र छिटो हो! तपाईं यात्रा तालिम यदि सवारी चलाउँदा त सुरक्षित रहन आवश्यक छैन, पनि गाडिहरु थप किफायती छन्, विशेष गरी तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने एक ट्रेन सेव तपाईंको रेल टिकट बुक गर्न. थप पत्यार पार्र्ने आवश्यक? हामी यस्तो लेखे एक पुरा ब्लग मा किन रेल यात्रा गर्न उच्च छ सडक यात्रा.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/safe-driving-during-winter/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#safetytips #travelingbycar #जाडो ड्राइभिङ europetravel Tranride